Retractable ratchet straps တွေရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
1. ပိုမိုလုံခြုံပြီး ယိမ်းယိုင်မှုမရှိသော သံမဏိကြိုးများကို တင်းကြပ်သည့် ကိရိယာသည် အနည်းဆုံး ပေါင် 2,000 အထိ ဆန့်နိုင်အားကို ဖန်တီးပေးကာ မတူညီသော ချိတ်တွယ်ထားသည့် အရာဝတ္ထု၏ မျက်နှာပြင်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာကာ သံမဏိပြားကို ပိုမိုခိုင်ခံ့စေပြီး အန္တရာယ်ကင်းစေသည်။မလှုပ်ရှားနိုင်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်...
lifting belt ပျက်စီးရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း လေးချက်ကို သိလား။
admin မှ 21-09-17 ရက်နေ့တွင်
Flat sling သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် အလွန်အဖြစ်များပြီး အသုံးပြုမှုထိရောက်မှုသည် အလွန်မြင့်မားသည်။သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး နှင့် လေးလံသော အရာဝတ္ထုများကို သယ်ဆောင်ရာတွင် မကြာခဏ မြင်တွေ့ရပြီး အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။သို့သော်၊ အသုံးပြုသူအများအပြားသည် lifting sling ကိုအသုံးပြုပြီးသည့်နောက်တွင်အစားထိုးရန်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ဒါဆို ဘာလဲ...
chain hoist ၏နိယာမကားအဘယ်နည်း
21-09-15 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Manual chain block သည် သေးငယ်သော စက်ကိရိယာများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အကွာအဝေး ရုတ်သိမ်းရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ရုတ်သိမ်းသည့်အလေးချိန်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 10T ထက်မပိုဘဲ အကြီးဆုံးသည် 20T အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ရုတ်သိမ်းခြင်း၏အမြင့်သည် ယေဘုယျအားဖြင့်6မီတာထက်မပိုပါ။သံကြိုးလွှင့်စက်၏ အပြင်ဘက်ခွံကို အရည်အသွေးမြင့် အလွိုင်းစတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး...
ကွင်းဆက်တုံး ချော်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတောင် သင်တွေ့ဖူးပါသလား- chain hoist ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း chain hoist ချော်သွားပါလိမ့်မယ်၊ တကယ်တော့ chain hoist ချော်ကျစေမယ့် အချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ friction disk ပါ၊ ဒါဆို friction ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကဘာလဲ။ ဒစ်စလစ်?​နောက်​​တော့ အ​ကြောင်းပြချက်​​လေး​တွေ ​ပြောပြမယ်​...
Webbing Sling အသုံးပြုမှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
Lifting sling belt ကို အဏ္ဏဝါ၊ ရေနံ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ပေါ့ပါးပြီး ပျော့ပျောင်းသော အလေးချိန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ဤထုတ်ကုန်သည် သုံးစွဲသူများ ပိုမိုနှစ်သက်လာပြီး အသွင်အပြင်များစွာတွင် ဝါယာကြိုးကြိုးများကို တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးလာသည်။လက်လွှဲကြိုး သက်တမ်းရှည်စေရန်အတွက် ဘာလဲ...
21-08-28 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ရုတ်တရတ်ကြီးပွားချမ်းသာလာသော အထူးစက်ကိရိယာမတော်တဆမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်အတွက် အောက်ပါ အရေးပေါ်စီမံချက်များကို ရေးဆွဲထားပါသည်- 1. 1.200 ကီလိုဂရမ်ရှိသော အသေးစားလျှပ်စစ်တွန်းလှည်းကို အသုံးပြုပြီး ရုတ်တရက် ဓာတ်အားချို့ယွင်းသွားပါက အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအား ကာကွယ်ရန်၊ ပတ်ပတ်လည်တွင် တားမြစ်ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ပေးသင့်ပါသည်။ အလုပ်ဆိုဒ်၊ sen...
လီဗာ လွှင့်တင်ခြင်းအတွက် အသုံးများသော စစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းများ
21-08-24 ရက်နေ့တွင် admin မှ
လီဗာလွှင့်တင်ခြင်းအတွက် အသုံးများသော စစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းသုံးမျိုး ရှိသည်- အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ဘရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်း ။အောက်တွင် ဤစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်- 1. Visual inspection 1. ratchet lever hoist ၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ကောင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်သင့်သည်၊...
လျှပ်​စစ်​လျှပ်​စစ်​ ​ဟော်​တိုင်​သည်​ အဘယ်ကြောင့်​ အလွန်​အ​ရေးကြီးသနည်း။
admin မှ 21-08-17 ရက်နေ့တွင်
ရုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်လှေကားများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကောင်းသည်။ပရောဂျက်များစွာသည် အသေးစားလျှပ်စစ် လျှပ်စီး ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်လှေကားစက်များ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အား ဤကဲ့သို့ ကြီးမားသောအကူအညီကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်ကို သင် သိချင်နေပေမည်။တစ်နည်းဆိုရသော် ဤလျှပ်စစ်မီးဖိုကြီး၏ တည်ရှိမှုအပေါ် မည်မျှ လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသနည်း။
Ratchet Tie Down ကိုအသုံးပြုနည်း
ကုန်တင်လက်စွပ်ကြိုးများသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရွေ့လျားမှု၊ ပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကုန်စည်သိုလှောင်မှုတွင် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။လော့ခ်ချထားပြီးနောက်၊ အရာဝတ္တုသည် ပြုတ်ကျရန် ခက်ခဲပြီး အရာဝတ္တုကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ တင်းကျပ်ရန်ဖြစ်သည်။1. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ ratchet ချည်နှောင်ခြင်းသည် s...
ASAKA Ratchet Tie Down ၏ အားသာချက်
1. ပိုမိုလုံခြုံပြီး ခိုင်ခံ့သော ASAKA ကုန်တင်ကြိုးများသည် အနည်းဆုံး ပေါင် 2,000 ဆွဲအားထုတ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိသော ချည်နှောင်ထားသည့်အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာကာ ကုန်ပစ္စည်းကိုကြိမ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းခါးပတ်ကို ပိုမိုခိုင်ခံ့စေပြီး အန္တရာယ်ကင်းစေသည်။ပုံမှန်မဟုတ်သော အရာဝတ္ထုများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။2. cargo belt က လုပ်ထားတာပါ..။
Electric Hoist Wire Rope လည်ပတ်မှုတွင် အထူးဂရုပြုရမည့် ကိစ္စများ
cd1 ဝိုင်ယာကြိုးလျှပ်စစ် လွှင့်ထူလည်ပတ်မှုတွင် အထူးဂရုပြုရမည့်အချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- 1. reel ပေါ်ရှိ ဝါယာကြိုးများကို သပ်ရပ်စွာ စီစဉ်ပေးသင့်သည်။ထပ်နေလျှင် သို့မဟုတ် စောင်းပါက ရပ်ပြီး ပြန်စီသင့်သည်။ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ဆွဲတင်၍ နင်းရန် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။
Bottle Jack ကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်သတိထားပါ။
ဟိုက်ဒရောလစ်ပုလင်းပေါက်ကို ရွေးချယ်သောအခါတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့်အချက်များစွာရှိသည်၊ ဥပမာ- 1၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပြီး၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန်ထက် ပိုမြင့်မည့် အလေးချိန်ကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ 20% နှင့်2. ခန္ဓာကိုယ် အရပ် နှင့် လေဖြတ်ခြင်း : t...